America Yorambidza Vanobva ku South Africa Kupinda Munyika
Ndira 25, 2021
Mutungamiri we America, VaJoe Biden, vashandisa simba ravo semutungamiri wenyika vakasaina magwaro, kana kuti Executive Order, ekubatsira mukurwisa Covid-19.
VaBiden vakatorawo mukana uyu vakasaina gwaro rekumbomisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuSouth Africa, kunze kwezvizvarwa zveAmerica zviri kudzoka kumusha.
VaBiden vanoti imwe mhando yeCovid-19 yakawanikwa muSouth Africa iri kupararira zvine mutsindo kunze kweSouth Africa.
VaBiden vakatapudzawo huwandu hwevanhu vanopinda mu America vachibva kuEurope nedzimwe nyika dzekuSouth America, dzinosanganisa Brazil.
Mhando yeCovid-19 yakawanikwa kuSouth Africa haisati yawonekwa mu America asi imwe mhando yeCovid-19 yakawanikwa ku United Kingdom yakawanikwa mune mamwe mumatunhu emuAmerica.
Nyanzvi mune zvehutano, Doctor Frenk Guni, vanoti zvaitwa naVaBiden zvekumbomisa kushanya kwevanhu vanobva kuSouth Africa chinhu chakanaka zvikuru nekuti mhando yeCovid-19 iri kuSouth Africa yakaipa zvikuru uye inotapuriranwa zviri nyore asi ichinonoka kuonekwa mumunhu anenge aibata.